तिथि मेरो पत्रु » कसले पहिले को तारीख मा बेहोर्छ?
कसले पहिले को तारीख मा बेहोर्छ?
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Dec. 06 2019 |3मिनेट पढ्न
मलाई कल नगर्नुहोस् “चिनी”
केही वर्ष पहिले, म दुई हप्ताको एक महिला संग तीन पटक बाहिर गए. म सबै कुराको लागि भुक्तानी चाहन्छु, तिनी आफ्नो वालेट बिर्सेका चाहन्छु बुझेपछि एक दर्जन ब्यागेल्स एक आइतबार बिहान सहित. त्यो उदारता अर्को मिति टिप्न गर्ने प्रस्ताव.
उनले मजा जस्तै लाग्यो कि एक खेल को सुनेको मलाई बताउन अर्को दिन काम मा मलाई भनिन्छ. त्यो म बाहिर पाउन सकेन भने टिकट उपलब्ध थिए भने त्यो व्यस्त र सोधे थियो. कुनै समस्या. म मात्र छ बायाँ थिए थिएटर भनिन्छ र सिकेका. के गर्ने एक मान्छे हो? कुनै ठूलो सम्झौता, म टिकट को एक जोडी किनेको र हामी बाहिर जानुअघि उनले खाने टिप्न चाहन्छु लाग्यो.
हाम्रो पछि $40 खाना, त्यो उनको क्रेडिट कार्ड तल तल राखे र बाथरूम गए. त्यो फिर्ता आउँदा, त्यो म टिप्न मेरो क्रेडिट कार्ड मा गरेनन् याद वा चेक विभाजित. जो माथि त्यो मलाई glared र भन्नुभयो, एक विष को टन र छैन विडंबना को एक बिखरना संग: 'म के हुँ, आफ्नो चीनी आमा?!’
हाँ, एक मान्छे हुनुको सधैं संसारमा सबैभन्दा इनामदायी कुरा होइन. तर तपाईं वाला के हो? म के बारे सोच रोकियो छु “निष्पक्ष” र म जन्मजात भएकाहरूलाई प्रणाली अँगाल्न निर्णय गरेका छन्. यस प्रणाली मा, एक मान्छे हर हालतमा दिन्छिन्, र एक महिला तिर्न प्रदान गर्दछ भने, उहाँले कुनै भन्न मानिन्छ. पहिलो केही तिथिहरु मा कम से कम. अथवा रूपमा लामो त्यो courted भइरहेको गर्नुपर्छ रूपमा. अथवा सधैं. यो महिला निर्भर. हामी हाम्रो होसियार तल गरौं सम्म थाहा र उनको एक चेक टिप्न अनुमति कहिल्यै गर्न सक्छन्. अनि फेरि, यो आफ्नो समतावादिएको व्यवहार सफाइ अक्सर ढिलो.
यो एक नाजुक हालत सबै सही छ र कुनै एक सही जवाफ छ. टाढा धेरै मितिहरूमा भएको जसले एक मान्छे रूपमा, म दुवै पक्ष र हरेक कोण देखि सबै कथाहरू सुनेका छौं. तर तर्क देखि यो संसारमा धेरै खेल प्राप्त जस्तो छैन, म वाला छु केही अनुहार समय दिन.
के मानिसहरू भन्छन्:
HER: उहाँले मलाई लागि चुकाएँ गर्नुपर्छ.
हो, र, सामान्यतया, त्यसो हो. उदार हुनु, विशेष गरी कसैले गर्न तपाईंको ख्याल, एक अविश्वसनीय भावना छ – सही त्यहाँ माथि, म भने छु, सबै कसैले लागि भुक्तानी गरेर संग.
उहाँलाई: उनले मलाई सबै कुराको लागि भुक्तानी गर्न चाहनुहुन्छ.
हो, र तपाईं जन्मनुभन्दा तरिका स्थापित भएको थियो कि नमुना हो. यो लडाई छैन, बस एक मुस्कान संग के, यदि तपाईं नहीं कारण, तपाईं अर्को मिति रही छैन.
HER: उहाँले तिर्न गर्ने, विशेष गरी सुरुमा.
यो तर्क एक सानो dicier छ. किन एक मानिस दिनुपर्छ? यो उदारचेता किनभने? मानिसहरू काम र महिला थिएन कि जब शिष्टता एक समय मा सुरु विचार. महिला, शाब्दिक, तिर्न सकेन. त्यसैले, चेक उठाएर मानिसहरू आवश्यकता बाहिर फस्टाइरहेका, छैन दया बाहिर. यो पछि एक सज्जन गरेको कोड मा संहिताबद्ध गरिएको छ, प्रश्न गर्न धेरै गरिब स्वाद मा छलफल गरिएको छ जो. म सोधपुछको नगरेको, तर तपाईं म पनि यो ल्याउन छु भनेर कति क्रोधित देख्न?
उहाँलाई: तर उनले मलाई बाहिर सोधे.
त्यसैले के? शिष्टाचार तपाईं पहिलो मिति लागि तिर्ने भन्छन् भने, र त्यो तपाईं पहिलो मिति लागि तिर्न चाहनुहुन्छ, र पहिलो मिति लागि खर्च गर्न सक्छन्, त्यसपछि बेइमान पहिलो तारीख लागि तिर्न.
HER: यो उहाँले बनाउने के कुरा छैन. एक सज्जन सधैं दिन्छिन्.
एक मान्छे मुद्रा को एक टन बनाउँछ भने, म तपाईंलाई आश्वस्त गर्न सक्छन्, यो हरेक पछिल्लो पेय र स्पा उपचारको लागि दुवैमा र तपाईं पक्कै हो राजकुमारी जस्तै व्यवहार गर्न आफ्नो पूर्ण आनन्द र अहोभाग्य. तर सस्तो भएर गरिब हुनुको बीच एक ठूलो फरक छ. सस्ता मान्छे उहाँले कम खर्चिलो चिकन आदेश जब माछा लागि आफ्नो मिति सोध्छन् अर्थ. गरिब उहाँले एक महिना मा पाँच मिति लागि तिर्न छ भने मान्छे समस्या किराया बनाउन यसको मतलब छ कि. आफ्नो ठाउँमा आफूलाई राख्नुहोस्: यो वैकल्पिक चेक गर्न चाहने लागि उहाँलाई दोष कडा छ.
मेरो समाधान छ, छैन आश्चर्यजनक, एक equivocation. यो सबै एक अर्को बुझ्ने कोसिस गरौं. मान्छे, सकेसम्म उदार हुन, मात्र त्यो गर्न चाहनुहुन्छ किनभने, तर यो साँच्चै इनामदायी किनभने “मान्छे हुन” र सजिलो जीवन मा बनाउन उनको. महिला, त्यो गर्न चाहन्छु रूप उदारचेता हुन मतलब छैन कि स्नातक विद्यार्थी वा स्कूलको सहानुभूति हुन. तपाईं हाम्रो चिनी Mamas नहुन सक्छ, तर हामी आफ्नो एटीएम गरेको हुनुहुन्छ भनेर दी यो गर्दैनौं कृपया, ठीक?
खुला नाता काम गर्न कसरी
राशिफल साइन गरेर एक पहिलो तारीख मा के गर्न